​हाम्रा रोज्ने कि राम्रा ?
शम्भु श्रेष्ठ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमबाट कस्ता अनुहार चुनिएर आउँछ भन्ने कुराले देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले स्थानीय निकायको चर्चा भइरहँदा दलहरुले हाम्रा होइनन्, राम्रा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन चुक्न हुँदैन । राम्रा उम्मेदवार पार्टीको सदस्य नरहन पनि सक्छन्, तर, त्यस्ता व्यक्तिलाई सबै दलले सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउन सक्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि नमूना बन्न सक्छ । समाजमा सबै राजनीतिक… विस्तृत समाचार
​कार्की र देउवा
शम्भु श्रेष्ठ । नेपालमा साँच्चैको लोकतन्त्र आएको भए शेरबहादुर देउवाजस्ता नेता जेल पुगिसक्थे । लोकतन्त्र भनेकै कानुनी राज हो । जहाँ अदालतको निर्णयलाइृ चुनौती होइन, सम्मान गरिन्छ । आफूलाई विपीको अनुयायी ठान्ने देउवाले कांग्रेस सभापति भइसकेपछि जे जति अपराध गरेका छन्, त्यसलाई लोकतान्त्रिक जामाले पनि छोप्न सकिन्न । कांग्रेसको सभापति भन्ने कुरा एउटा पदीय जिम्मेवारी हो । त्यो पदमा आज देउवा छन् भने हिजो विपी… विस्तृत समाचार
​हात लाग्यो शून्य
शम्भु श्रेष्ठ । नेपालको आर्थिक विकास नहुनुको प्रमुख कारण भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो । ००७ सालदेखि अहिलेसम्मको हिसाब गर्ने हो भने ६ दशकभन्दा बढी हामीले राजनीतिक अस्थिरतामै बितायौं । कहिले पञ्चायत त कहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ । कहिले कांग्रेसभित्रको विवाद र पार्टी विखन्डन त कहिले एमालेभित्रको गुटबन्दी र विभाजनले गर्दा राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्यायौं । यो राजनीतिक अस्थिरता निम्तनुमा को कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको विश्लेषण पनि हामीले… विस्तृत समाचार
​मधेसमा द्वन्द्वको बिऊ
८ चैत्र २०७३
शम्भु श्रेष्ठ । एमालेको मेची–काली अभियानमा लाखौं जनताको सहभागिताले नेपाली जनताको चाहना संविधानको कार्यान्वयन नै हो भन्ने बुझिन्छ । त्यसका लागि तिनै तहको निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा सम्पन्न हुनुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयनबिना संघीयता पनि संस्थागत नहुने हुँदा मधेसवादी दललाई संघीयता चाहिएको हो भने संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा उभिनु जरुरी छ । अहिले मधेसवादी दलले जसरी सिमांकनको कुरा उठाएर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुरा गरिरहेका… विस्तृत समाचार
​भित्री र बाहिरी डिजाइन
शम्भु श्रेष्ठ । सप्तरीमा एमालेको सभा भाँड्न खोज्दा प्रहरीको गोली लागेर तीन युवाको मृत्यु भयो । उता कैलालीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर अर्का युवाको मृत्यु भयो । यी दुई घटनाको पृष्ठभूमि फरक भए पनि यी दुई घटना यस्तो बेलामा घटाइएको छ कि, नेपालमा संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएको छ । यी दुई घटनाले आम नेपाली जनतामा निर्वाचन नै नहुने हो… विस्तृत समाचार
शम्भु श्रेष्ठ । चौध खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०७३’ समापन भएको छ । यसैमा हामी नेपाली दंग छौं । नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो प्रतिबद्धता कोशेढुंगा सावित भएको छ । हरेक पटकको सम्मेलनमा ठूला ठूला लगानीको गफ हुने गरेको धेरै पटक सुन्दै आएका पनि छौं । भूकम्प पीडितलाई राहत दिन पनि सरकारले यस्तै सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यहाँ पनि ठूला… विस्तृत समाचार
१६ फाल्गुन २०७३
शम्भु श्रेष्ठ । देशको राजनीति दिन प्रतिदिन दलदलमा फस्दै गएको छ । मुलतः संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । ०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न नभए देश दुर्घटनामा जाने पक्का छ । त्यसपछिको ‘शून्यता’मा खेल्ने र नेपालको राजनीतिलाई आफू अनुकूल डोहो¥याउने रणनीति संविधान विरोधीहरुको हो । यस कुरामा प्रमुख दलहरु पराजित हुँदै गएका छन्… विस्तृत समाचार
​समृद्धिको गजेडी गफ
शम्भु श्रेष्ठ । हिजोआज काठमाडौंमा ‘दिगो पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ विषयक गोष्ठीमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । गोष्ठीमा भाग लिन आएका एक जना विदेशीले त काठमाडौं–दिल्ली रेल कुदाउने सपना नै बाँडे । सम्मेलनका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन र भारतको विकासबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने गफ हाँके । गोष्ठीमा उपस्थित बुद्धिजीवीहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर समृद्धिको आधार औंल्याए । उद्योग क्षेत्रका तीसभन्दा बढी विज्ञ, नीति निर्माता सहभागी… विस्तृत समाचार
​चेतना र चरित्र
शम्भु श्रेष्ठ । लोकतन्त्र भनेको विधिकोशासन हो । नभए किन चाहियो लोकतन्त्र ? लोकतन्त्रको माध्यमबाट सभ्य समाजका निर्माण गर्दै मुलुकलाई समृद्धितिर अगाडि डोहो¥याउनु विशेषगरी शासकवर्गको जिम्मेवारी हो । तर, नेपालजस्तो देशमा लोकतन्त्र शासकवर्गका लागि लुटीखाने भाँडो बनेको छ । आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्नेदेखि क्रान्तिकारी सबैले देश लुटेर खाइरहेको दृश्य दिनहुँ हामीले देखेका छौं । तर, पनि तिनीहरुलाई कुनै लाज छैन । लोकतन्त्रलाई नै निरवस्त्र पारेर आफ्नो… विस्तृत समाचार
​०७४ माघ ७
शम्भु श्रेष्ठ । समय भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । समयअनुसार सबै कामहरु हुँदै गए भने समस्याहरु पनि समाधान हुँदै जान्छन् । समयअनुसार काम भएन भने समस्या थपिदै जान्छन् र समाधानका बाटोहरु जटिल बन्दै जान्छन् । बाटोहरु जटिल हुनु भनेको एक अर्कामा अविश्वासको वातावरण बन्दै जानु र एकले अर्कोलाई घात गर्दै जानु हो । र एकले अर्काको खुट्टा तान्नु नै हो । अहिले नेपालको राजनीतिमा… विस्तृत समाचार